Ciidamada Maraykanka oo duqeyn ka geystey degmada Saakow – AfmoNews
Taliska ciidamada Maraykanka ee Africa AFRICOM ayaa shegay in duqeyn ay ka geysteen maanta oo ah 24ka bisha December dhisme ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab magaalada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
Qoraal ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu xusay in duqeyntan waxyeelo lagu gaarsiiyey xarun ay Alshabaab lahaayeen,balse laguma xusin qoraalka in waxyeelo ka soo gaartay dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab.
“Waxaan qiimeyneynaa in ay waxyeelo ka soo gaartay dad rayid ah duqeyntan oo sababtay in argagaxisada ay baqo cagaha jabsadaan.”ayaa lagu yiri qoraalka.
Hase yeeshee qoraalka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu xusay in Alshabaab uu halis ku yahay dalka Soomaaliya iyo wadanka Kenya iyo meelo kale.
“Dadaallada lagu kala dhantaalayo howlgallada cadowga, sidoo kalena lagula soconayo oo cadaadis lagu saarayo Al-Shabaab weli waa ay socdaan,” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay AFRICOM.
Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada Maraykanka ay bilaabeen inay ka baxaan dalka Somaaliya kadib markii uu Madaxweynaha xilka ka sii degeya uu amray in ay boorsoyinkooda ka xirxirtaan dalka Soomaaliya.